Ila Qosol: Ket Mada Sarey - Cakaara News
Ila Qosol: Ket Mada Sarey
Arbaco(CQ) Wiil dhalinyaro ahaa oo ka dib soo qalinjabintiisii jaamacadeed aan in mudo ah helin wax camal shaqo ah naawilayayna in uu mar uun heli doono shaqo ayaa aan Mobilekiisa aan wax lacag ah ku shubin Mudo jeebkoo nacas ka ahaa awgeed. Wiilkii ayaa in mudo ah ka dib waxaa u suurtogashay in uu helo fursad shaqo oo durbadiiba bilaabay.
Mushaarkiisii ugu horeeyay ee uu qaatay ayaa uu Mobile-Card 25 ah juq siiyay markii ugu horaysay mobilekiisii balse waxaa Qosol afkala qaad ah kala hortimid Biibidii Mobileka ka dhex hadlaysay muujisayna in ay la yaabtay macaamilkan ku cusub maanta tidhina "ket mada saareey" oo micneheedu yahay xageed ka soo dhacday maanta kkkkkkkkk
Ninkii Inanla'yaalka ahaa iyo Nayshii Rabaastay
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa reerkii
guuray oo hayyaameen .Caagane iyo sodohdii waxa loo xil saaray inay kaxeeyaan awrta raran ee alaabtu saaran tahay dadka intiisii kalena inay soo kaxeeyaan xoolaha. Wax la,socdoba awrkii Caagane waday ayaa ka dheereeyay kuwii sodohdu waday oo markiiba dhaafay.
Cosoble oo meeldhexe maraya ayaa gaajooday oo damcay inuu caano ka shubto dhiil awrka saarnayd. Markii uu awrkii fadhiisiyay ee uu dhiishiina furay ayaa wax dhaceen!.
Nayl yar oo labo habeen jirtay oo awrka saarayd ayaa intay soo booday ku dhex dhacday dhiishii caanaha ahayd oo ku dhex dabaalatay.Caagane ayaa markiiba nayshii yarayd ka soo bixiyay dhiishii .Markii uu arkay nayshii yarayd oo dusha ku leh subag ayuu Caagane billaabay inuu dusha ka leefleefo nayshii yarayd isaga oo illowsan inay sodohdii soo daba socotay.
Sodahdii ayaa soo gaadhay oo aragtay Caagane oo isla baraad la` oo weli nayshii leefleefaya.Sodohdii oo yaabban in cabaar ahna ku dheygagtay Caagane iyo Nayshaayaa tidhi: "Caagane hooyo waa ku sidee" Caagane oo hawshiisii iska sii wata ayaa yidhi: " waa Caagane oo nayl ogolaaday"